Shaqo La’aanta Dhalinyarada Waxa Usababa Jaamicadaha Somaliland W/Q Siyaasi Sacad Makaawi | Berberatoday.com
Shaqo La’aanta Dhalinyarada Waxa Usababa Jaamicadaha Somaliland W/Q Siyaasi Sacad Makaawi
Shaqo la’aanta waxa sababa jaamicadaha:
Ardayda secondary ga inooga soo baxdaa 60% C iyo D grade, hadii jaamicadu aanay aqbalin, saw xirfado kale oo ay ku shaqeystaan May abuureen, laga yaabaa inay hal abuurk kale oo hibooyin ah leeyihiine.
40% inoo soo hadhay ee A & B grade ka ahna jaamicada waxbarasho tayo leh, oo shaandho miirteedii wadata la inoo siiyo kaliyana 20% shaandhada soo dhaafa ee u qalma shahaadooyinkooda ay soo saaraan, xirfad shaqeynaysana soo baraan.
Dhalinteenu 80% xirfado iyi farsamooyin ay bartaan ku xoogsanaya, 20% aqoonta sare ee ay barteyn lagu cidhiidhyeyn oo tayo leh ayey noqon lahayeen. Mabay jirteen shaqo la’aani.
Lkn jaamicad business u furan A & D iskugu mid yihin, hadhowna shahaado aan wadan waxa ay sheegeyso soo saaraan, oo ardaygaasi paragraph English qori karin, hadii la weydiiyo maxaad baratay saw Dow maaha inuu yidhaa “International relationship instead of IR ama Economy instead of economics” saw maaha natiijadiina inay noqoto suuqii shaqada oo badhaasuqa iyo fursadihii oo la isku cidhiidhyo????
Waxa Qoray Siyaasi Sacad Makaawi